PAKAIPA: South Africans set date for massive demo at Zim embassy in Pretoria #ZimbabweanLivesMatter | My Zimbabwe News
Home News PAKAIPA: South Africans set date for massive demo at Zim embassy in...
A South African pressure group #NotInMyName will be staging a mass protest at the Zimbabwean Embassy in Pretoria in solidarity with suffering Zimbabweans on Friday.
The march is being organised by famed South African activist Themba Masango.
The much-hyped march follows a series of Tweets by South African eminent persons and celebrities who used #ZimbabweanLivesMatter hashtag to highlight the plight of Zimbabweans.
Economic Freedom Fighters have called for the closure of the Zimbabwe Embassy until the government respects human rights.
Previous articleMig0dh0yi yevanhu: ‘White’ farmer blasts opposition for organising anti-Zanu PF demos (WATCH VIDEO)
Next articleBREAKING NEWS: 26 Zanu PF members catch Covid-19